आफ्नै बुबाले छोराको ज्या”न लिन स्कुल मै गु”ण्डाहरु पठाएपछि, बनेपामा हेर्नुस् !! ( भिडियोसहित ) - Mitho Khabar
आफ्नै बुबाले छोराको ज्या”न लिन स्कुल मै गु”ण्डाहरु पठाएपछि, बनेपामा हेर्नुस् !! ( भिडियोसहित )
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on आफ्नै बुबाले छोराको ज्या”न लिन स्कुल मै गु”ण्डाहरु पठाएपछि, बनेपामा हेर्नुस् !! ( भिडियोसहित )
आफ्नै बुबाले छोराको ज्या”न लिन स्कुल मै गु”ण्डाहरु पठाएपछि, बनेपामा हेर्नुस् !! ( भिडियोसहित ) **भिडियो अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला** हेलम्बु पुगेका मन्त्रीलाई गाउँलेहरूले – ‘भोट माग्न भए त चाँडै आउनु हुन्थ्यो होला है’ मन्त्री ज्यु भनेपछी यस्तो भयो । कुनैबेला भुकम्प र बाढी पहिरोले थिलथि’लो पारेको सिन्धु पाल्चोक यो वर्ष फेरि बाढीको निशानामा परेको छ । धेरै धनजनको क्ष’ति भएको सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष फेरि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक बाढी पि’डीत भएका छन्।
लगभग दस दिनपछि बाढी पिडीतलाई भेट्न पुगेका मन्त्रीलाई हेलम्बुबासी रिसाउँदै भन्छन्, “भोट माग्न भएको भए त चाँडै आउनुहुन्थ्यो होला, हामी पिडीतलाई भेट्न बल्लतल्ल आइपुग्नुभयो।”उता मन्त्री झन् पि’डीत स्थानीयलाई राहत दिनु त कता हो कता उल्टै पि’डीतको प्रश्नमा सबाल जवाफ दिँदै भन्छन्,”हामी आएर जे गर्नु,न त तपाईं खोलामा गएर एउटा ढुङ्गा उठाउन सक्नु हुन्छ न त म नै सक्छु।यहीँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्,काम गर्नको लागि एउटा निश्चित तह छ, त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो भन्दै छुद्र शैलीमा जवाफ दिए।
स्थानीयका अनुसार यी सबै बजारहरु बगरमा परिणत भएका छन्।बाढीले घर, सम्पत्ति सबै बिनाश गरेपछि रातभर घरमाथिको पाखोमा गएर रु’वा’बासी गर्दै बस्नुपर्‍यो। एकजना ५४ वर्षीय व्यक्ति भन्नुहुन्छ, “मेरो मात्रै १० करोड भन्दा बढीको सम्पत्ति गयो,अब मेलम्ची बजार पहिलेकै अवस्थामा आउन सय वर्षजती लाग्ला।” यसरी मेलम्चीमा बाढीले ता’ण्डव नै म’च्चाएकाे छ। इन्द्रावती र मेलम्चीमा आएको बाढिको कारण मेलेम्ची खानेपानी आयोजना र इन्द्रावती हाइड्रोमा ठूलो क्ष’ति भएको छ।
एउटा खुट्टा मात्र बोकेर हस्पिटल बाहिर अलपत्र भए, सके सहयोग गरिदिनुहोस्, नसके सेयर गरिदिनुहोला ! ( भिडियो )
भर्खरै आयो दुखत खबर हेर्दा हेर्दै राहत सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर दुर्घ*टना (हर्नुहोस भिडियो)